Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကလေး ၅၀: အိမ်သို့သွားသောနေရာ - မယုံနိုင်စရာခရီး - လှုပ်ရှားမှုစွန့်စားမှု
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကလေး ၅၀: အိမ်သို့သွားသောနေရာ - မယုံနိုင်စရာခရီး
ဟောလီဝုဒ် ၂၆၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ - ဟောလိဝုဒ်မှာကျင်းပတဲ့ (၈၉) ကြိမ်မြောက်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာသရုပ်ဆောင် Michael J. Fox ကစာနယ်ဇင်းခန်းမမှာပြသခဲ့ပါတယ်။
'Castle Rock': Hulu မှစတီဖင်ကင်းစကြ ၀ seriesာစီးရီးအတွက် 'Moonlight' သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သည် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးဟာသတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ - အဘယ်သူမျှမရာသီရာသီ ၂
Homeward Bound - Michael J. Fox၊ Sally Field နှင့် Don Ameche တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော The Incredible Journey သည် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကလေးရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်ပါဝင်သည်။
ဒစ္စနေးရဲ့ Homeward ခညျြနှောငျ: အဆိုပါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခရီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလတွင် Netflix တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးလက်နက်များဖြင့်ကြိုဆိုခဲ့သည်။ ယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသည် Homeward ခညျြနှောငျ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၌တည်၏ Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကလေးရုပ်ရှင် ၅၀ ။
သငျသညျမမွငျခဲ့လျှင် အိမ်သို့သွားရန်၊ မင်းဒါပျောက်နေတယ် ဒီဟာကကျွန်တော်ကလေးဘဝတုန်းကငါ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒီရုပ်ရှင်ကိုမကြိုက်သူဘယ်သူ့ကိုမှငါမသိဘူး!
အဆိုပါရုပ်ရှင် Sheila Burnford ရဲ့ဝတ္ထုကိုအခြေခံသည် မယုံနိုင်စရာခရီး နှင့်တူညီသောအမည်ဖြင့်၏ 1963 ရုပ်ရှင်။ Caroline Thompson၊ Linda Woolverton နှင့် Jonathan Roberts တို့သည်ရုပ်ရှင်အတွက်ဇာတ်ညွှန်းရေးခြင်းဖြစ်ပြီး Duwayne Dunham ကဒါရိုက်တာကိုရိုက်ကူးခဲ့သည်။
RELATED: Netflix မှအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀
Michael J. Fox သည်ချန့်စ်ကိုဘူဒိုဇာတစ် ဦး အဖြစ်အသံလွှင့်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်ကိုလည်းပြောပြသည်။ သူသည် Sally Field၊ Kim Greist၊ Don Ameche၊ Veronica Lauren၊ Benj Thall၊ Robert Hayes နှင့် Kevin Chevalia တို့ပါဝင်သည်။
Homeward ခညျြနှောငျ သူတို့မိသားစုဟာဆန်ဖရန်စစ္စကိုကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအခြေချနေထိုင်စဉ်မိသားစုသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုပေးတဲ့ကြောင် Sassy (Sally Field) နဲ့ခွေးနှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Shadow (Don Ameche) နဲ့ချန့်စ် (Michael J. Fox) နဲ့ကြောင် Sassy (Sally Field) တို့အကြောင်းပြောပြသည်။ အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများအပြီးတွင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည်သူတို့ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးမိုင်ပေါင်းရာချီသောဆန်ဖရန်စစ္စကိုသို့သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဖတ်ရမည်Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကလေးရုပ်ရှင် ၅၀
ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူး။ ဒီတနင်္ဂနွေမှာ Netflix မှာစောင့်ကြည့်ဖို့တစ်ခုခုရှာဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်မကြည့်တာလဲ အိမ်တွင်းသို့အကန့်အသတ်ရှိသလား။ သင်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်! နှင့်အညီ, တစ် Netflix ကဘဝအာမခံချက်ပါပဲ။ သင့်ရဲ့ကလေးတွေလည်းချစ်ကြလိမ့်မည်!
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးကလေးရုပ်ရှင် ၅၀ တွင်အခြားဒစ္စနေးရုပ်ရှင်ကားများစွာရှိသည် Zootopia၊ တောတွင်းစာအုပ်၊ ရှာဖွေခြင်း Dory၊ Lilo & Stitch၊ နှင့်ပိုပြီး! သူတို့ကိုကြည့်ပြီးသည့်နောက် streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ကြည့်ပါ Homeward ခညျြနှောငျ!
Netflix ကအပေါ် 30 အကောင်းဆုံး bromances
မင်ဒီစီမံကိန်းစီမံကိန်း ၆၊ အပိုင်း ၂ ပြန်လည်စုစည်းခြင်း
Dungeons နှင့် Dragons ကစားသောလူစိမ်းပစ္စည်းများကြည့်ပါ
House of Cards ရာသီ ၆၊ အပိုင်း ၃ ပြန်လည်စုစည်းခြင်း - အခန်း ၆၈
All the Boys အားလုံးအတွက် Emilija Baranac အသက်၊ Instagram၊ အမြင့်၊ အခန်းကဏ္: - Gen မင်းသမီးအကြောင်းကိုသိသင့်သိထိုက်သည်
Supergirl ရာသီ (၇) ရက်၊
Arrested Development: အလုပ်မဖြစ်သော Bluth မိသားစုဝင်များအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
Netflix တွင်အကောင်းဆုံးအဖြစ်မှန်ကိုယခုပြသသည် (အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈)
အမေရိကန်ထိတ်လန့်မှုဇာတ်လမ်းရာသီ ၈ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၅ နာရီအွန်လိုင်း
ozark ရာသီ 1 ဇာတ်လမ်းတွဲ3recap
လိမ္မော်ရောင်သစ်ကိုအနက်ရောင်ရာသီ5Netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲဖြစ်ပါသည်
မုဆိုး x မုဆိုးရှိရာသီမည်မျှရှိသည်
သင်တစ်ရာသီ3ရှိပါသလား
ရုံးကအကောင်းဆုံးစုံတွဲ ၁၀ ယောက်
အခုကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံး Netflix အချစ်ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင် ၅၀
ဒီတနင်္ဂနွေကိုကြည့်ဖို့ကောင်းသော Netflix ရုပ်ရှင် ၅ ခု - The Babysitter2နှင့်ထို့ထက်ပိုသည်
Even မှ Mia McKenna-Bruce ၏အသက်၊ အမြင့်၊ Instagram ကိုရယူပါ။ Bree မင်းသမီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားသင့်သမျှ